911 CD Operator Key Generator 2017 [Umusi]
Hey abathandi game, ingabe ufuna ukudlala ezinye umdlalo wokutakula for ngokuphelele free? Namuhla esinakho 911 CD Operator Key Generator Avaí ...
In Sawubona Umakhelwane, sicabange umsebenzi ongumhlali evamile lasemakhaya, ngubani cishe akuzange uhlole i-Moby Dick, futhi Useqala ukucabanga ukuthi kamakhelwane wakhe ophethe ezinye iqhinga awful. Ukuqinisekisa izinsolo zakhe, ethanda agxumele emiphongolweni alandelayo umnyango wakhe kamakhelwane. Ngeke kube umsebenzi olula unikezwa ukuthi guy isexwayiso ngempela futhi, uma sokucasuka, uzoyeka at lutho ukunciphisa imiphumela yanoma yikuphi ingozi ubumfihlo wakhe siqu.
Sawubona Umakhelwane ye-PC / Windows isenzo esilayidi isiqophi umdlalo. umakhenikha wayo lomkhulu innovative uchwepheshe uhlelo esikuvumela lo umakhelwane khumbula gamers izenzo ukubikezela relocations yakhe ephakeme yesikhathi esizayo. ukuthola Ukuvimbela– kubalulekile ukuze uqede umdlalo ividiyo– yingakho ugcina ngokuba more xaka kulapho Gamer kuthatha Yiqiniso engaqhathaniswa ngenkathi kuzanywa lushelele udlule umakhelwane. thrashings Ngokuvamile ithathwe ngokushesha ifakwe izicupho (ukuthi indlela yokuphunyuka Gwema), nezinselelo (ezifana amabhodi e amawindi), futhi alamu (efana isiqophi amakhamera isebangeni ngezikhathi ezithile).
I Gamer kungaba ukusebenzisa decoys ukuze aphambukise lo umakhelwane futhi ulawule imvelo ngendlela eyenza ukuthola nzima villain. Asikwazi ukusebenzisa eziningi izinto ngokomzimba ukuthi kungenziwa babexhumana, (Ngokwesibonelo, sikwazi ukuthatha igilobhu kusuka ukukhanya ukugwema umakhelwane ekushintsheni ukukhanya oku), a ITHELEVISHINI elikhulu noma umsakazo, ngisho ukudweba umakhelwane ku izingibe ukuthi wazimisela.
Sawubona Umakhelwane usinikeza ukufinyelela nesizotha isitokwe endaweni lapho ungumdlali ungagcina kafushane imikhiqizo kubalulekile ngesakhiwo ezifana izimfihlo. Uma ikhombe, ukuze singalahlekelwa imikhiqizo ebalulekile, kudingeka sigcine up la mathuluzi emuva ekhaya umlingisi phambili sika. Otherwise, ngaphandle Iqalisa ezingeni, silahlekelwa yonke imikhiqizo sike bahlangana.
Sawubona Umakhelwane ye-PC / Windows lusekelwa ngamandla Engine ngiyaphupha 4. Abaklami athuthukile ukhombise impilo ihluzo cartoonish esihlinzeka Ngokuphambene ethakazelisayo nge imvelo Gameplay sika ekhathazayo.